रामकला खड्का आइतवार, असार २५, २०७४ 1965 पटक पढिएको
भाइबहिनीहरू आज गुरुपूर्णिमा । गुरु कक्षाकोठामा पढाउने व्यक्तिमात्रै होइन, हामीलाई जीवनोपयोगी जुनसुकै सीप सिकाउने र त्यो पाउनका लागि वातावरण मिलाइदिने व्यक्ति पनि गुरुमै गनिन्छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु-२, सेर्माथाङका कान्छा लामा पनि यिनै व्यक्तिमध्येमा पर्नुहुन्छ।
लामा परिवारमा जन्मेकाले उहाँका बाबा उहाँलाई लामा नै बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । त्यसैले अनौपचारिक शिक्षाबाहेक विद्यालयमा पढ्ने अवसर उहाँलाई मिलेन । सानैमा बाबाको मृत्यु भएपछि उहाँ सन् १९५८ मै रोजगारीका लागि भारत जानुभयो । भारतमा ठेक्कापट्टा गर्ने कान्छाको गाउँमा एउटा ठूलो होटेल र रिसोर्ट खोल्ने चाहना थियो । यसैका लागि उहाँले करिब ९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा पनि पाइसक्नुभएको थियो ।
आफूले पढ्न नपाएको र गाउँको सरकारी विद्यालय ज्योति निमावि पनि त्यति नचलेको देखेपछि त्यही जग्गामा विद्यालय खोलेर गाउँका बालबालिकालाई शिक्षा दिने सोच उहाँमा पलायो । त्यति बेला १२ कक्षा पढ्दै गरेका आफ्ना भतिज गोपाल लामाको नाममा २०४१ सालमा याङ्रिमा प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो ट्याममा स्कुल थिएन, हामीले पढ्न पाएन । हेलम्बु भेगमै स्नातक गरेको मानिस एकजना पनि थिएन । त्यसैले नयाँ पुस्तालाई शिक्षा दिन विद्यालय सुरु गर्‍यौं ।'
करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलको मात्रै लालपुर्जा भएकाले सोही क्षेत्रमा विद्यालय फैलिएको छ । स्थापनाकालमा जम्मा १५ जना विद्यार्थीबाट सुरु गरिएको यस विद्यालयमा हाल सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आफ्नो भतिज गोपालले बेलायतको इङ्ल्यान्डमा रहेका आफ्ना साथीहरूसँग सहयोग मागेर विद्यालय भवन र अन्य सुविधाहरू तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयबाट करिब तीन ब्याचले एसएलसी दिइसकेका थिए । विद्यालय राम्रै गतिमा चलिरहेको थियो । तर, द्वन्द्वकाल सुरु भएपछि चार पाँच सय माओवादीले आएर विद्यालयलाई घेरी त्यहाँ भएका कम्प्युटर, टेलिफोन, सोलार, रासनलगायतका सामग्री लुटेर लगे । बाँकी रहेका केहीमा पनि आगो लगाइदिएकाले करिब नौ वर्षसम्म विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द भयो । यद्यपि २०५८ सालमै याङ्रिमाका शिक्षक र विद्यार्थी गरी जम्मा १७ जनाले इङ्ल्यान्डको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भ्रमणमा जाने अवसर पाए । त्यति बेला विद्यालयबाट एसएलसी दिने विद्यार्थीमध्ये धेरै आज डाक्टर, इन्जिनियर, व्यापारीलगायतका व्यक्ति बनिसकेका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वका कारण नौ वर्षसम्म बन्द भएको विद्यालयलाई पुन एकपटक २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त बनायो । त्यति बेला विद्यार्थीले पढ्ने र बस्ने ठाउँ नपाएपछि सेर्माथाङमै रहेको उहाँको स्नोफल माउन्टेन रिसोर्टमा विद्यार्थीलाई एक वर्षसम्म राखेर पढाइयो । अमेरिकामा बस्दै आउनुभएकी उहाँकी पत्नीले त्यहाँबाट सहयोगस्वरूप उठाएर पठाएको पैसाले विद्यार्थीको खानपान र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइयो ।
हाल पनि अति विपन्न र भूकम्पमा आमाबाबु गुमाएर परिवारका १३ भन्दा बढी विद्यार्थीलाई उहाँकी पत्नीले छात्रवृत्तिमा पढाइरहनुभएको छ । त्यसैगरी आफ्ना भतिज गोपाल र उहाँकी पत्नी छिरिङ पनि इङ्ल्यान्डकै घर बेचेर विद्यालयको पुनर्निर्माणमा कस्सिएको लामाले बताउनुभयो । गाउँको धेरै याद आउने हुनाले रिटायर्ड लाइफ उता बिताउन सकिन्न भनेर उहाँले अमेरिकाको सिटिजन लिनुभएको छैन । गाउँ बिर्सन नसकेर वर्षको दुईतीनपटक उहाँ अमेरिकाबाट यहाँ आउने गर्नुभएको छ ।
भूकम्पपछि विद्यालयबाट भर्खरै एक ब्याच विद्यार्थीले एसईई पास गरे । नतिजा त्यति राम्रो नभए पनि अर्को सेसनदेखि गुणस्तर बढाउँदै लैजाने उहाँको सोच छ । त्यहाँ पढाउने शिक्षकशिक्षिकालाई पनि चित्तबुझ्दो सेवासुविधा दिन नसकिएको र उहाँहरूले पनि सेवाभावले मात्रै विद्यालयमा काम गरिरहनुभएको उहाँले बताउनुभयो।
लाइब्रेरी, कम्प्युटर कक्षा, डाइनिङ हल, ग्रिन हाउस लगायतका सुविधा भएको उक्त विद्यालय चलेदेखि गाउँको एउटै सरकारी विद्यालय पनि बन्द भइसकेको छ । उत्तिकै शुल्कमा बोर्डिङमा पढ्न पाएपछि विद्यार्थीको आकर्षण आङ्रिमातर्फ बढेको हो । सुन्दर र स्वस्छ वातावरणका कारण विद्यार्थी पनि प्रतिभाशाली नै रहेका टोखाबाट गएकी शिक्षिका अम्बिका नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीलाई नेपाली पढाउनुका साथै नृत्य र नाटक पनि सिकाउने गर्नुभएको छ ।
भूकम्पले हच्केका कारण गाउँमा मुस्किलले तीनचार सय जनामात्रै बसोबास गर्छन् । धेरै काठमाडौं र केही विदेश पलायन भइसकेका छन् । यी रहेका जनसंख्यामा पनि नयाँ पुस्ताले स्तरीय शिक्षाका लागि कतै जान नपरोस् भन्ने उहाँको चाहना छ । यही कारण उक्त विद्यालयलाई कलेज तहसम्म पुर्‍याउने सपना उहाँले देख्नुभएको छ । ‘द्वन्द्वकालको नौ वर्ष लस नभएको भए स्तरीय कलेज भइसक्थ्यो होला', धेरै वर्षअगाडि देखेको सपना आज पूरा भएकोमा निकै खुसी हुनुहुन्छ ७४ वर्षीय लामा । विद्यालयलाई कलेज तहसम्म पुर्‍याउने आफ्नो नयाँ सपना पनि चाँडै नै पूरा हुनेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
लिऊँ गुरुको आशीर्वाद
गुरुब्र्रह्मा गुरुर्विष्णु गुर्रुदेवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः
असार शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा महर्षि वेद व्यासको सम्झनामा गुरुपूर्णिमा मनाइन्छ । विश्वमा धेरै विद्वान् जन्मिए पनि उहाँले पहिलो पटक हिन्दु धर्मको चारवटै वेदको व्याख्या गर्नुभएको थियो । नयाँ आउने पुस्तालाई जीवनमा गुरुको महत्व बुझाउन पनि यो पर्व निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । गुरुको आशीर्वाद सबैका लागि कल्याणकारी र ज्ञानवद्र्धक नै हुन्छ । त्यसैले गुरुको पूजा गरेपछि उहाँको आशीर्वाद लिन बिर्सनु हुँदैन र यो पर्वलाई श्रद्धाभावको पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ ।
कोइरालाले सम्हालिन् प्रदेश प्रमुखको कार्यभार 118
प्राथमिकतामा परेन विद्युतीय गाडी 246
एउटा गजुरलार्इ १६ तोला सुन चाहिने 265
के गर्नुपर्छ कांग्रेसले ? 148
बीपी राजमार्गमा दुर्घटना बढ्यो, सचेतना गराउँदै प्रहरी 53
सहिद परिवार भन्छन्, ‘सपना पूरा हुने भो' 182
सिँगारिँदै प्रदेश मुख्यालय 282
रित्ता भाँडा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए महिला 154
१९ हजार निजामती कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने 604
गाउँपालिकाभित्र अब ६ मिटर सडक ! 679
चीनले बनायो हावा सफा गर्ने विश्वकै अग्लो टावर 3366
वेबबेस मोबाइल आईएमईआई दर्ता कार्यान्वयनमा लगिँदै 615